Nilatsaka tanteraka ny saron-tavan’ny mpanohitra, misakana ny hanatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka, na referandaoma, izay midika ho fanampenam-bava ny vahoaka malagasy tsy haneho hevitra, ary miezaka mafy mitarika ny adihevitra amin’ny tsy tokony ho izy.
Nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ilay fihaonana tamin’ny mpanao gazety teny Iavoloha farany teo, fa tokony hofidiana ny filoham-pokontany fa tsy tendrena amin’ny maha solontenam-panjakana voalohany sady akaiky ny vahoaka azy ireny. Mbola tsy tafiditra ao anatin’ireo andininy ao amin’ny lalàm-panorenana anefa izany fifidianana filoham-pokontany izany, hoy ihany ny Filoham-pirenena.
Ny fitsapan-kevi-bahoaka, na referandaoma dia fifidianana andraisan’ny vahoaka anjara mivantana hanehoany ny heviny, mitovy amin’ireny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka, ary ben’ny tanàna rehetra ireny, sady sehatra ahafahan’ny mpanao politika mpomba, na mpanohitra ny fitondrana mivoy sy mandresy lahatra ny vahoaka rahateo koa. Mazava ho azy fa ny fampandaniana ny ENY no tanjon’ireo mpanao politika mpomba ny fitondrana, ny TSIA kosa no avy amin’ny fanoherana, ary ny vokatra aorian’ireny fitsapan-kevi-bahoaka ireny dia ahafahana mitaratra sahady ny safidim-bahoaka amin’izay fifidianana hifandimby.
Ny vahoaka no tompon’ny teny farany na inona karazana fifidianana hatao eto amin’ny firenena: filoham-pirenena, solombavambahoaka, ben’ny tanàna, fitsapan-kevi-bahoaka, sns. Manana adidy mandresy lahatra ny vahoaka hifidy ny ENY ny mpanao politika mpomba ny fitondrana; hampifidy ny TSIA kosa ny mpanohitra, fa ny vahoaka hatrany no tompon’ny teny farany. Koa mampametra-panontaniana ny fihetsiky ny mpanohitra eo anatrehan’ny mety hisian’ny referandaoma na fitsapan-kevi-bahoaka: tena ilay lalàm-panorenana hasiam-panitsiana marina ve no olan’ny mpanohitra, sa matahotra hiatrika fifidianana? Ny fanoherana ny fanatanterahana ny referandaoma na fitsapan-kevi-bahoaka dia midika ho fanampenam-bava ny vahoaka malagasy tsy haneho hevitra, dia sanatria ve ny tahotry ny mpanohitra hiatrika fifidianana no hanasaziana ny olom-pirenena tsy haneho ny safidiny?